Wararka Xanta Suuqa Kala Iibsiga Ee Maanta Pogba, Tomori, Sanches, Wijnaldum, Williams, Giroud
HomeSuuqa kala iibsigaWararka Xanta Suuqa kala iibsiga ee maanta Pogba, Tomori, Sanches, Wijnaldum, Williams, Giroud
December 17, 2020 Suuqa kala iibsiga, Wararka Ciyaaraha 0
Juventus ayaa wadahadalo la furtay wakiilka Paul Pogba iyaga oo doonaya in ay dib ula soo saxiixdaan 27 jirka khadka dhexe uga ciyaara kooxda Man United . (Express)
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee West Ham iyo England Declan Rice, 21, ayaa doonaya inuu u dhaqaaqo Chelsea bisha Janaayo. (Football.london)
Liverpool ayaa isha ku heysa 23 jirka qadka dhexe uga ciyaara Lille ee Renato Sanches. (Le10 Sport)
Liverpool ayaa u weecan doonta Sanches si ay u buuxiso booska Georginio Wijnaldum. Waxay doonayaan inay ceshtaan 30 jirka qadka dhexe ee reer Netherlands laakiin ma doonayaan inay aqbalaan codsigiisa qandaraas afar sano ah. (Express)
Manchester United ayaa sugi doonta ilaa iyo bisha Janaayo si ay go’aan uga gaarto hadii ay fasaxeyso 20 jirka daafaca bidix ee reer England Brandon Williams, kaasoo lala xiriirinayay Southampton iyo Newcastle inuu amaah ku baxo. (Manchester Evening News)
Chelsea ayaa kalsooni ku qabta inay ku dhagi karaan weeraryahankooda Olivier Giroud oo 34 jir ah bisha Janaayo isla markaana uu ciyaari doono booskiisa xulka France ugu sii hayo Koobka Qaramada Yurub xagaaga soo socda. (Telegraph)
Manchester United ayaa wali suuqa ugu jirta ciyaaryahan garabka ka ciyaara, daafac dhexe, garabka midig iyo qadka dhexe ee daafaca laakiin rajada ayaa ah inaysan jiri doonin saxiixyo bisha Janaayo. (Manchester Evening News)
Paris St-Germain iyo weeraryahanka reer Brazil Neymar, oo 28 jir ah, ayaa beeniyay wararka sheegaya inuu ku laabanayo Barcelona , isagoo sheegay inuu ku faraxsan yahay caasimada Faransiiska. (Express)
Arsenal ayaa laga yaabaa inuu u dhaqaaqo bisha Janaayo Porto xidigeeda 20-sano jirka ah ciyaaryahanka qadka dhexe ee reer Portugal Fabio Vieira iyagoo diyaar u ah in ay bixiyaan uu £ 27m lagu burburin karo. (Ku duub boostada)
Manchester United ayaa dib u soo cusbooneysiisay xiisihii ay u qabtay 26 jirka Atletico Madrid iyo xulka Spain Saul Niguez. (Teamtalk)
Tababaraha Arsenal Mikel Arteta ayaa weydiistay saraakiisha kooxda inay la soo saxiixdaan ciyaaryahanka khadka dhexe ee Real Madrid Isco, 28, iyo ciyaaryahanka khadka dhexe ee Lyon ee reer France Houssem Aouar, 22, bisha Janaayo. (Teamtalk)
Manchester City ayaa diyaar u ah inay u ogolaato 18 jirka garabka ka ciyaara ee reer Holland Jayden Braaf inuu baxo. (Dailymail)